Cunnada ugu habboon ee cuntadaada: himilada miisaanka oo yaraada | Ragga Stylish
Cunnooyinka habboon ee miisaanka lumi kara
Had iyo jeer maahan marka laga hadlayo cuntada in la dhimo miisaanka oo lumiyo, waa in loo gudbiyo cunto adag iyo jimicsi. Xaqiiqdii, waddadani waxay layaab ku noqon kartaa marka hore, laakiin muddada dhexe iyo muddada dheerba waxay leedahay khataro caafimaad.
Furaha ayaa ku jira tabaruc sax ah oo ah fiitamiinnada, macdanta iyo kalooriyada, qaadashada cuntooyinka ku habboon. Waxay ku saabsan tahay in jirka lagu ilaaliyo caafimaad qab iyo inuu ku fiicnaado shaqada.
1 Biyo cab
4 Hilib caato ah
Sida ugu fudud ee ay umuuqato, biyuhu waa cunsur aasaasi ah miisaan luminta cuntada.
Biyaha la cabbo waxaan xoojineynaa soo noolaanshaha unugyadeena, waxaan xoojineynaa howlaha dheefshiidka, waxaan dhiirrigelinnaa nuugista nafaqada ee ku filan, waxaan iska ilaalinaa cudurada afka iyo waxyaabo kaloo badan.
Bariis bunni, shaciir, miro, qamadi iyo kuwa kale. Ku saabsan yahay cunnooyinka ay ku jiraan heerarka sare ee faybarka iyo kaalshiyamka. Qaadashadiisu waxay kicineysaa socodka caloosha ee jirkeena, taas oo u oggolaaneysa inay sumoobo oo miisaan lumiso.
uu isha fiitamiinada iyo macdanta. Marka laga soo tago dabiiciga, waxaa loo qaadan karaa habab badan oo kala duwan, macmacaan, macaan, casiir, iwm.
Qaar ka mid ah, sida avocado, waxay na siiyaan dufan heerkeedu sarreeyo.
Hilib caato ah
Hilibka caatada ah waa waxa, marka lagu daro haysashada heerka dufanka oo hooseeya, na siiso borotiinada leh saameyn kuleylka jirka. Jidhkeenu wuxuu gubtaa 30% kaloriisa waqtiga dheefshiidka.
Culeyska miisaanka luminta wuxuu ka koobnaan karaa digaag, hilib lo'aad, turkey, hilibka doofaarka iyo jilicsanaanta.
Khudaarta ayaa lagama maarmaan u ah cuntada iyo culeyska miisaanka oo yaraada. Marka lagu daro kaloriinta oo ku yar, iyagu waa sahay fiitamiinno ah, fiilooyin iyo macdano aad u fiican karti u leh inuu buuxiyo cilladaha suurtagalka ah.
Cuntada iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo ayaa na siiya borotiinnada aan u baahanahay, iyo sidoo kale kaalshiyamka jirkeennu u baahan yahay. Waa muhiim in la doorto badeecadan dufanka yar. Jiis, caano iyo caano fadhi ayaa lagu dari karaa cuntadeena.
Ilaha sawirka: Tilmaamaha Jimicsiga / El Confidencial
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Cunnooyinka habboon ee miisaanka lumi kara
Afar siyaabood oo laysku daro jaakadaha raadraaca jiilaalka